बन्द हुँदैछ मोटरसाइकल र स्कुटरको उत्पादन - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, असर १०। भारतमा सन् २०२५ सम्म १५० सीसी भन्दा कम इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल र स्कुटरको उत्पादन बन्द गरिने तयारी हुँदैछ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको थिंकट्याङ्क ‘नीति आयोग’ विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिन सरकारलाई यस्तो सल्लाह दिएको हो । नीति आयोगले दुई पांग्रे र तीन पांग्रे सवारी साधन निर्मातालाई दुई हप्ताभित्र भविष्यको योजना सहित आउन सूचना जारी गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस गाडीमा ५० लाख र मोटरसाइकलमा ४ लाख मूल्यवृद्धि !
किन उठाइयो यो कदम?
भारतको राजधानी लगायतका सहरहरू विश्वकै सर्वाधिक प्रदूषित सहरका रूपमा देखिएपछि प्रदूषण राष्ट्रीय चासोको विषय बनेको छ । सरकारले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण रोक्न विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ । सरकारले पेट्रोल चालित सवारी साधन निर्माताहरूलाई २०२५ सम्म समय दिने बताएको छ । सरकारले उक्त समयसीमा भित्र १५० सीसी मुनिका दुई पांग्रे साधनहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनमा फेर्ने योजना समेत बनाउन लागेको भारतीय मीडियामा प्रकाशित छ ।
भारतीय न्यायपालिका प्रदूषणसम्बन्धी मामिलामा निकै संवेदनशील रहेको छ । त्यहाँका सवारी साधन निर्माताहरूलाई पनि समय अगावै उचित निर्णय नलिए अदालतले नै त्यस्ता वाहनहरुको उत्पादनमा रोक लगाउन महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकने डर रहेको छ । नीति आयोगले गत हप्ता बोलाएको बैठकमा दुई पांग्रे सवारी साधन निर्माता र विद्युतीय वहां निर्माताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उसैले २०२३ भित्र तीन पांग्रे र २०१५ भित्र दुई पांग्रे सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा बदल्ने लक्ष्य लिएको छ । एजेन्सी
ट्याग्स: motorcycle, scooter